कांग्रेसमा भावि नेतृत्वको अग्निपरिक्षा, यी आकांक्षी मध्ये कस्ले मार्लान त बाँजी ? – Mission Khabar
कांग्रेसमा भावि नेतृत्वको अग्निपरिक्षा, यी आकांक्षी मध्ये कस्ले मार्लान त बाँजी ?
मिसन खबर २५ मंसिर २०७८, शनिबार १८:५५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भावि नेतृत्वका लागि चार शीर्ष नेताहरुबीच टकराव हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवंम बहालबाला सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा दोहोरिने गरि उम्मेदवारि दर्ता गरेका छन् भने उनलाई शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधी र प्रकाशमान सिंहले चुनौति दिएका छन् ।
देउवा र कोइरालाले सभापतिसँगै प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा थाल्दा निधीले प्यानलबिना नै सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यस्तै, सिंहले दुई उपसभापति र एक महामन्त्रीको टिम बनाएर सभापतिको उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सभापतिका लागि ६ जना नेताहरुको भिडन्त निश्चित भइसकेको छ । लो प्रोफाइलका दुई उम्मेदवार कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिस्पर्धी ६ जना भएपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा देउवा र कोइरालाबीच हुने आँकलन गरिएको छ ।
को–को छन त पदाधिकारिका प्रतिस्पर्धी ?
देउवाको प्यालमा पुराना अनुहारहरु बढी समेटिएका छन् । उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र डा. विजय गच्छेदारले उम्मेदवार दिएका छन् । महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत र प्रदिप पौडेल प्यानलमा समेटिएका छन् । युवा नेता पौडेलले सिटौला समुहबाट स्थान पाएका हुन् । महिला सह–महामन्त्रीमा डिना उपाध्याय, जनजाती सहमहामन्त्रीमा भिष्मराज आङ्गदाम्बे, मधेशी सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव खस\_आर्य सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौँर, थारु उमाकान्त चौधरी, मुस्लिम परम्ल्ला मन्सुर, पिछडिएको जिवनबहादुर शाही, दलित सहमहामन्त्री मानबहादुर बिश्वकर्मा देउवा प्यानलमा समेटिएका छन् ।
कोइरालाको प्यानलबाट उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङले उम्मेदवारि दर्ता गराएका छन् । महामन्त्रीमा मिनेन्द्र रिजाल र गगनकुमार थापा समेटिएका छन् । सहमहामन्त्रीतर्फको महिला कोटामा कमला पन्त, जनजाती कोटामा विकास लामा, मधेशीमा रामकृष्ण यादव, खस\_आर्यमा देवराज चालीसे, थारुमा तेजुलाल चौधरी, मुष्लिमतर्फ शेख वकिल, पिछडीएकोतर्फ बद्री पाण्डे र दलित कोटामा जीवन परियारले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रकाशमानले उपसभापतिमा सुजाता कोइराला, महेश आचार्य र महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मालाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा उभ्याएका छन् । शर्मा देउवाको प्यानलमा नअटेपछि सिंहको प्यानलमा पुगेका हुन । उपसभापतिमा दिव्यश्री साहले समेत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । महामन्त्री पदमा राजाराम कार्कीले समेत उम्मेदवारि दर्ता गराएका छन् । सहमहामन्त्री पदमा रञ्जित कर्ण समेतको उम्मेदवारी परेको छ ।
१३४ पदका लागि ५४८ को उम्मेद्वारी परेको पाइएको छ । १३ पदाधिकारीका लागि मात्रै ३९ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । १ सय ३४ केन्द्रीय सदस्यका लागि ५ सय ९ जना प्रतिस्पर्धी बनेका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा युवाहरुको बाहुल्यता बढ्दै गरेको कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा रोचक भिडन्त हुँने आँकलन गरिएको छ । शेरबहादुर देउवाले दोश्रो कार्यकाल दोहोर्याउन पाउलान वा नेतृत्व फेरिन्छ यो प्रतिक्षाको बिषय भएपनि देउवा र कोइराला बिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै छ । पहिलो चरणमा कुनैपनि उम्मेदवराले कांग्रेस विधान अनुसारको ५१ प्रतिशत ल्याउने सम्भावना देखिदैन । दोश्रो चरणमा देउवा र कोेइराला मध्ये कस्ले बाँजी मार्छन चासोका साथ हेरिएको छ ।